Falanqeeyayaal Ka Hadlay Xasuuqii Bankraftu ka geysteen Leego.(Dhagayso) – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
On Sep 30, 2020 342 0
Ciidamada Bankrafta waxay ka amar qaataan ciidamada Maraykanka
Axmed Cabdullaahi iyo Maxa’ed Nuur oo ah falanqeeyayaal Soomaaliyeed ayaa waraysi dood wadaag ah oo ay kaga qeybgaleen Idaacadda islaamiga ee Al-Furqaan waxay kaga hadleen dhacdadii naxdinta badneyd ee dhawaan ka dhacday deegaanka Leego ee gobolka Shabeellaha Hoose.
Aqoonyahannadu waxay isku raaceen in ciidamada Bankrafta ee ka hoos shaqeeya Maraykanka loo dhisay sidii ay u dhibaateyn lahaayeen umadda Soomaaliyeed ee nabadda ku heysta deegaannada lagu maamulo Shareecada Islaamka.
Waxay usoo jeediyeen shacabka Soomaaliyeed iney fadhiga ka kacaan, islamarkaana iska difaacaan duulaanka lagu soo qaaday dalkooda, iyagoo garab siinaya Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab.
Dhawaan ayay ahayd markii ciidamo katirsan Bankrafta ay deegaanka Leego ee gobolka Shabeellaha Hoose ku dileen 10 ruux oo midi haweeney ahayd, waxaana dhacdadaas aad uga xumaaday guud ahaan shacabka Soomaaliyeed.
Halkan ka dhagayso Falanqeeyayaal ka hadlay Xasuuqii Leego